Zazavavy tsara tarehy tahaka ahy - tovovavy Indiana
Mahafinaritra ny tovovavy tahaka ahy dia Truffaut frantsay Horonan-tsary amin’ny alalan’ny François. Endrika ho an’ny rindra an-tsehatra ny tantara toy izany Georgeos Ankizy Tahaka Ahy amin’ny Henry Farrell. Ny tanora ary somary henjana ny mpampianatra sosiolojia i stanislas Pervin te-hanoratra ny voka amin’ny heloka bevava ny vehivavy sy ho Sambatra noho ny fanadihadiana Camille voafantina, izy no nohadihadiana tao an-tranomaizina ny resume. Ny heloka Bevava hatrany, fantatra mba mampiasa zavatra ny tombony azo, dia milaza ny manavakavaka tantara ny fiainana, manomboka amin’ny trosa-nitaingenanao hatrizay nanananao ahy fahafatesan ny raikeliko, ny olona hametraka ny sivy taona any amin’ny reformatory. Nanaraka azy, afa-mandositra avy amin’ny fialokalofana, izy mitantana ny hanambady haingana ny mbola tsy ampy taona manao hosoka ny fitondrana vohoka. Tsy tsikaritra loatra aza, izany dia manomboka ny portrayals fitarihana ny amin’ny vehivavy ny zava-drehetra, mbola tsy nahita fiainana ny mpahay siansa ny fanatanjahan-tena, ka io fanoloran-tena io, miaraka amin’ny Hélène, manoratra ny tonony sy amin’ny fitiavana azy, fa Camille ny raharaha, fa izy dia tany am-ponja indray, nanakodia. Izy no mitantana ny mahita ny Mpankafy sarimihetsika, dia mety ho voaporofo fa Camille tsy hamono ny voalavo exterminators Arthur. Eo ambanin’ny lehibe sain’ny haino aman-jery, dia ho voaroaka, ary dia tonga dia manomboka mahomby Mampiseho ny asany. Toy ny mpifankatia i stanislas nitsidika ianao, dia zava-nitranga ho amin’ny zava-niseho ny fahasaro-piaro amin’ny Camille ny vadiny. Izy ireo nitifitra ny vadiny ary i stanislas mba hanantona ny heloka bevava izay izy no nampidirina am-ponja. Avy eo rehefa ny reny-in-lalàna maty, ny fitaovana ao amin’ny satria ny fotoana ela avy amin’ny Camille voaomana fandrika mahafaty, dia handova ny fananany. I stanislas nanazava ny mpisolovava ny fomba Camille manana ny reny-in-lalàna novonoina.
Dia mazava fa ny mpahay lalàna dia manana ny raharaha amin’ny Camille, ary miaraka aminy ny porofo farany ny simba ny vola ho an’ny Camille ny tsiny. nanoratra Truffaut ny Mpiara-mpanoratra Jean-Wolf Danaide, izy no mieritreritra ny andraikitry ny Camille Hatsatra amin’ny Claude nibodo ny Vatosoa, nahita izy, na dia izany aza, mbola tanora loatra sy naka folo taona noho ny Bernadette Lamont.
Ny Horonan-tsary dia voatifitra teo amin’ny faritra Atsimon’i Frantsa, Beziers
Tale François dia mihaino Truffaut ny tany am-Boalohany, toy ny feon ny mpanao gazety. Ny Horonantsary ny asa fanompoana dia ny:»amin’ny fomba Kilalao, ny Horonan-tsary no mametraka ny fitsipi-olona antonontonony amny’ny mpia fitondran-tena, ary nametraka tontolo iray izay impudence-tena mahaliana ny fahamarinana. Ny Horonan-tsary izay mandalina ny azo atao vazivazy mainty, sy ny fomba, ny tselatra, sy ny hazavana manohana-tahaka ny singa.»Ny Aterineto vavahadin-sarimihetsika ny fotoana dia milaza fa:»Amin’ny malefaka, manaikitra Hatsikana, ary indraindray clownish Manitatra eo amin’ny fandraisana andraikitra sy ny dramaturgy eo ambany François Truffaut ny alahelo, ny mampihazohazo sy ny alahelo toy ny mahazatra, ny vahoaka eto amin’ny iray sy vehivavy ny maha-izy azy, mitaky manontolo ny entana azy ireo fatratra, tsotra loatra ny tetika olombelona, ary farany ny rehetra ny manara-maso.»Ny fitsidihana Ny Manafintohina Ny tantaran’ ny rano ianao, ary ianao dia nikapoka azy tsy maintsy mba mitifitra ny fanorohana, ny piano mpilalao, Jules ary Jim fitiavana amin’ny roapolo (Ampahany Antoine sy Colette), Ny mamy hoditra ny Fahrenheit, Ny ampakarina nanao mainty Nangalarina oroka, Ny zava-miafina ny diso ampakarina Ny amboadia zazalahy Latabatra sy am-pandriana dia izy Roa vavy avy any pays de Galles, ary ny fitiavana ny kaontinanta, Ny tovovavy tsara tarehy toy izany ho aho, Ny Amerikana alina Ny tantaran’ny Adele H. ny vola am-paosy Ny lehilahy tia vehivavy Ny maitso trano-fitiavana ny mihazakazaka Ny farany Metro Ny vehivavy varavarana manaraka Amin’ny fitiavana sy ny fahafatesana
← Hitsena ny vehivavy iray ao amin'ny New Delhi - maimaim-poana ny mampiaraka toerana
Chatroulette online Tumblr →